Asa 20: 28-38, - Ny Baiboly
Asa toko 20, 28-38,
<28Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra, nanendren'ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina mba hifehezanareo Eglizin'ny Tompo izay novidiny tamin'ny rany. 29Fantatro fa rahefa lasa aho, dia hisy amboadia masiaka hiditra eo aminareo, izay tsy hitsitsy ny ondry. 30Ary ny sasany avy aminareo aza dia hitsangana hampianatra hevi-diso, ka hitaona ny mpianatra hanaraka azy. 31Koa miambena re, ary tsarovy lahy fa telo taona maninjitra anie aho no tsy nitsahatra andro aman'alina nananatra anareo tsirairay avy tamin-dranomaso!
32Ary ankehitriny, ankiniko amin'Andriamanitra sy amin'ny tenim-pahasoavany hianareo, dia amin'ilay mahay mandavorary sy manome lova anareo miaraka amin'izay efa masina rehetra. 33Tsy mba naniry izay volafotsy, na volamena, na fitafian'olona aho. 34Fantatrareo fa ireto tànana ireto no nahazoako izay rehetra nilaiko sy nilain'izay rehetra niaraka tamiko. 35Nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tsy maintsy hiasa toy izany koa hianareo mba hanampiana ny mahantra, ka hahatsiaro ny tenin'i Jesoa Tompo manao hoe: Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.
36Nony avy nilaza izany izy, dia nandohalika ka niara-nivavaka tamin'izy rehetra. 37Ary nitomany mafy izy rehetra, sy namihina ny vozon'i Paoly ary nanoroka azy, 38fa nalahelo loatra izy, indrindra ange fa tamin'ny nilazany hoe: Tsy hahita ny tarehiko intsony hianareo. Dia nanatitra azy hatreny antsambo izy ireo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 1.5600 seconds